Halyeeyga Magaalooyinka Ugu Cagaarshowrsan Mid kasta oo ka mid ah 50ka Gobol Qaybta 10
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Halyeeyga Magaalooyinka Ugu Cagaarshowrsan Mid kasta oo ka mid ah 50ka Gobol Qaybta 10
Warar Naxdin LehYaab leh oo aan caadi ahayn
Dhab ahaantii ma waxaan gaarnay dhamaadka safarkii halyeeyga ee magaalooyinka annaga oo marayna Mareykanka?! Waxaan filayaa inaan haysanno. Way adag tahay in la rumaysto, laakiin halkan waxaan la joognaa shanta gobol ee ugu dambeeya safarkayaga naxdinta leh waxaanan rajaynayaa inaad ku raaxaysatay inaad aqriso intii aan wax ka qoray.
Hadda, sababtoo ah waa cutubka ugu dambeeya ee safarkan, ha lumin rajada! Shantan kama dambaysta ah waa sida ugu fiican marka hore, oo intaanu ka maqnayn gobollada, marna ma ogaan doontid meesha aan u xigi karno xiga!
Waa maxay halyeeyga magaalooyinka aad ugu jeceshahay waqtiga oo dhan? Noo soo sheeg faallooyinka!
Sawir ahaan Flickr
Waxaan sugay waqti dheer si aan u aado Virginia si aan ugala hadlo Bunnyman. Sheekadu gabi ahaanba waa ay i xiisaysa. Waa halyeey run ah oo reer magaal ah, oo ka dhashay laba dhacdo oo dhacday 1970, oo qaadatay nolol u gaar ah oo dhiirrigelisay sheekeeyeyaal, filim sameeyeyaal, farshaxanno, iyo fannaaniin isku mid ah.
Tani waa halka ay ka bilaabatay Burke, Virginia:
Oktoobar 19, 1970, Cadet Robert Force Bennett iyo nin ay isqabeen waxay fadhiyeen gaari meel yaalay markii nin ku labisan suud bunni ah uu ka soo ordayo geedaha isagoo koofiyadna ku qaylinaya labadooda, “Waxaad tahay mid gaar ah hanti aniga iyo waxaan haystaa lambarkaaga sumadda!
Ninkii ayaa usii dhaqaaqay inuu furka ku tuuro gaadhiga, kaas oo daaqada ka jabsaday kuna dhacay sagxadda guriga iyadoo Bennett uu u xuubsiibtay inuu kaxeeyo. Ninkii wuxuu u qayliyey iyaga sidii ay u baxsanayeen ka hor inta uusan dib ugulaaban kaynta.
Toban maalmood ka dib Oktoobar 29-keedii, Paul Phillips, oo ah ilaaliyaha dhismaha, ayaa helay nin ku labbisan dhar madow, madow, iyo caddaan ah. Phillips ayaa sifiican uga fiirsaday gacan ku dhiiglaha, isaga oo ku tilmaamay inuu jiro qiyaastii 20 sano jir, 5'8 ″ iyo wax yar oo xamaasad leh. Ninkii wuxuu bilaabay inuu faas ku fuulo barxadda balbalada isagoo ku qaylinaya, “waad xadgudbeysaa. Haddii aad u soo dhowaato, madaxa waan kaa jarayaa.
Booliska Degmada Fairfax ayaa furay baaritaano la xiriira dhacdooyinka, oo labadaba aakhirkii la xiray sababo la xiriira caddeyn la’aan.
Waxay ku filneyd inay dhaliso male-awaalka dadka deegaanka, hase yeeshe.
Wixii ku xigay waa halyeey reer magaal ah dahab. Dhowaan sheekooyin ayaa bilaabay inay ka soo baxaan Bunnyman dahsoon iyo asalkiisa iyo waliba ujeeddooyinkiisa.
Mid ka mid ah sheekooyinka noocaas ah waxay dib u socotaa waqti ka dib illaa 1904 markii laba bukaan oo magangalyo doon ah ay baxsadeen u carareen kaynta u dhow aagga. Dhowaan dadka deegaanka ayaa helay meydadka bakayle maqaar, nus cunay. Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah ayaa laga helay isaga oo ka laallaada Bridge Bridge Station Bridge iyadoo ay saaran yihiin cows aad u fara badan, oo ay ku jiraan koofiyad gacmo lagu sameeyay, waxayna masuuliyiintu u qaateen in dhacdooyinkii la yaabka lahaa ay dhammaadeen. Si kastaba ha noqotee, markii meydad bakayle oo badan la helay, markiiba waxay cadaatay in baxsadkii kale uu wali ku jiro dabacsan.
Hadda, waxay yiraahdaan, Bunnyman wali wuu baacsanayaa aagga, wuxuu argagax gelinayaa dadka deegaanka wuxuuna ka laalayaa dhibanayaashiisa isla buundada ay ku soo dhawaatay Halloween. Dabcan, wax caddayn ah tan tan weligeed lama helin, laakiin taasi kama horjoogsanayso waalidiinta inay uga digaan carruurtooda inay taxaddaraan Halloween si aysan ugu dhicin Bunnyman.
Kani waa nooc ka mid ah sheekooyinka ku soo kordhay agagaarka halyeeyga halyeeyga ah, waana wax i xiiso gelinaya aniga in dhammaantiin ay u muuqdaan inay ka soo baxeen laba dhacdo oo dhacay 1970s nin uu u muuqday inuu ka careysan yahay dhismaha xaafadaha magaalada hareeraheeda. deegaanka.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Bunnyman, waxaan aad ugula talinayaa Jenny Cutler Lopez maqaalkiisa “Long Bunnyman” Waqooyiga Virginia Magazine laga bilaabo 2015. Waxay kahadleysaa dhacdooyinkii bilowga ahaa laakiin sidoo kale waxay aadeysaa habka loo soo koray agagaarka Bunnyman.
Washington: Indhaha Iftiiminaya ee Dugsiga Sare ee Mariner
image by yhiae ahmad ka Pixabay
Dugsiga Sare ee Mariner ee ku yaal Everett, Washington wuxuu aad ugu egyahay dugsi kasta oo kale oo dalka ka jira marka laga reebo hal faahfaahin oo yar. In kastoo qaar ka mid ah laydhadhka iskuulka loo daayo habeenka oo dhan sida kuwa kale, habeennada qaarkood habeenbadhka saqda dhexe, laydhadhku way birqayaan iyagoo dhulka ku ridaya mugdi.
Markay taasi dhacdo, dadka deegaanka qaarkood waxay dhahaan, waxaad arki kartaa labo indhood oo dhalaalaya oo ka ifaya mugdiga iskuulka. Waxaa intaa dheer, waxay dhahaan haddii aad indha indheeysid muddo dheer, waxaad bilaabi doontaa inaad aragto sawirka nin baalal leh oo ku dhex jira dugsiga.
Kani kani ma qaar aan rasmi ahayn, oo mascot ka sarraysa? Mothman walaalkiis yar miyuu dhigtaa fasalada habeenkii? Qofna ma hubo, laakiin waxay yiraahdaan waad dareemi kartaa indhaha oo ku eegaya intaadan arkin ka hor, iyo in waxay ka dhigeysaa uun nooca saxda ah ee uur-ku-jirta liiskan.
West Virginia: Ardayda Madaxa La 'ee Gobolka Monongalia
Halyeeygan reer magaalka ah waa mid kale oo nolosha ka soo jiiday kiis dil aad u naxdin badan oo dhab ah bishii Janaayo, 1970. Laba wada-shaqeyn ah, Mared Malerik iyo Karen Ferrell, ayaa isku dayayay inay raacaan gaari ka dib markii ay ka baxeen filimada dabayaaqadii Janawari. Dib dambe looma arag ilaa meydadkooda oo go’ay laga helay keynta bilo kadib.
Dadka deegaanka si sax ah ayey uga argagaxeen kiiska, shan sano kadibna wali lama xalin ilaa nin lagu magacaabo Eugene Clawson uu qirto dilka. Waa tan sheyga, in kastoo. In kasta oo Clawson aan la dafiri karin uu ahaa nin xun – haddana isagana waxaa lagu xukumay kufsi uu u geystay gabar 14 jir ah – dadka badankiis uma malaynaynin inuu isagu dhab ahaan dambi ku lahaa dilka labada gabdhood ee la hadal hayo.
Kiiska wuxuu ahaa mawduucyo la soo duubay, baaritaanno, iyo buugaag tan iyo markii la xiray Clawson lana xukumay, cidna uma maleynayo inuu dhab ahaantii dambigaan galay.
Haddaba yaa qabtay? Baarayaasha kasta, waxaa jira tuhmane ka duwan, runtiina way adag tahay in la sheego.
Waxa aan ognahay waa tan iyo waqtigaas, wararka xanta ah iyo warbixinnada indha indheynta laba haween ah oo aan madaxa lahayn ayaa ku soo xoomay wadada dheer ee Mared iyo Karen markii ugu dambeysay lagu arkay. Xaqiiqdii, in kabadan hal shil baabuur ah ayaa lagu eedeeyay muuqaalka mashquulinta darawallada.
Jinniyadani miyay ku tiirsan yihiin waqtiyadoodii ugu dambeeyay ama halyeey reer magaal ah oo masiibo ka dhalatay si looga digo dhalinyarada halista halista?
image by lea rajo fiican ka Pixabay
Jid kali ah oo u dhow Dodgeville, Wisconsin waxay hoy u tahay naxdin cabsi leh oo loo maleynayo inay tahay isku darka ruuxa labo walaalo ah oo ku dhintay dagaal ka dhacay baar 1840s.
Tan iyo wakhtigaas, sida la qiyaasayo wareegyada 40 sano, xawligu wuu soo noqonayaa. Maxaa si gaar ah u cabsi badan oo ku saabsan halyeeygan reer magaalka ah, si kastaba ha noqotee, waa cunsurka qaab-u-beddelaya. Waqtiyada kala duwan, Ridgeway Ghost waxaa loo arkay xayawaan sida eyda iyo doofaarrada sidoo kale qaadanaya qaab rag iyo dumar iyo xitaa kubbado waaweyn oo dab ah. Uguyaraan hal warbixin xitaa waxaa kujiray fardoole aan madax lahayn.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay ugu yeeraan aragtida indha indheynta shaqooyinka nacnaca, laakiin kuwa soo maray dhacdooyinka gacanta koowaad ayaa kuu sheegi doona si kale.
Wyoming: Markabkii Dhimashada ee Wabiga Waqooyiga Platte
image by enzol ka Pixabay
Waxaan ahay nuugaya a markab wanaagsan sheeko…
Laga soo bilaabo 1860-meeyadii, markab qarsoodi ah oo qarsoodi ah ayaa laga soo sheegey Wabiga Waqooyiga Platte ee Wyoming. Waxay u muuqataa bangiga ceeryaanta badhtanka maalinta - marka waxyaalahan oo kale sida caadiga ah aysan jiri doonin –waxayna ka soo ifbaxayaan hooska, oo dhaxan ku daboolan iyadoo shaqaalihiisu ay rooxaanno saaran yihiin.
Waxa ugu argagaxa badan markabkan ayaa ah in lagu soo waramayo inuu muuqdo wax yar uun ka hor inta uusan qof dhiman. Intaas waxaa sii dheer, waxay dhahaan waxaad dhab ahaan arki doontaa muuqaalka qofka loo qoondeeyay inuu ku dhinto dusha markabka, oo dhaxan loo daboolay sida shaqaalaha kale.
Waxaa jira sheekooyin badan oo ku saabsan Markabka Geerida, laakiin waxaan kaliya la wadaagi doonaa kan lagu duubay Kaliya Gobolkaaga:
In ka badan 100 sano ka hor, nin dabin ah oo lagu magacaabo Leon Webber ayaa ka warbixiyay la kulanka markabka muuqaalka leh. Markii hore, waxa kaliya ee uu arkay waxay ahayd kubbad ceeryaamo weyn. Wuxuu ku deg degay webiga qarkiisa si uu ugu soo dhawaado oo xitaa wuxuu ku tuuray dhagax baaxadda wareegaya. Markiiba waxay qaadatay qaab markab shiraac ah, waa dhoobada iyo shiraacyada lagu daboolay silvery, dhaxan dhalaalaya.
Webber wuxuu arkayay dhowr badmaax, oo sidoo kale dhaxan lagu daboolay, oo ku soo xoomay wax jiifa dusha markabka. Markii ay ka dhaqaaqeen iyagoo u sheegaya aragti cad, wuu la yaabay markuu arkay inay tahay meydka gabar ay eegeen. Isagoo u dhowaanaya, dabinku wuxuu u aqoonsaday inay tahay gabadhiisa. Qiyaas naxdintiisa markii uu ku noqday gurigiisa bil kadib si uu u ogaado in gacalisadiisii ​​dhimatay isla maalintii uu arkay muuqaalka cabsi leh.
Wixii intaas ka badan oo sheekooyinkan ah, Riix halkan.
Waa hagaag… waa intaas. Waxaan ka soo qornay halyeeyga reer magaalka ah ee aan jeclahay ee ka socda mid kasta oo ka mid ah 50-ka gobol ee Mareykanka Ma leedahay wax aad jeceshahay? Ma jiraan dad kale oo aad doorbidi lahayd? Noo soo sheeg waxa aad u maleyneyso hoosta!
Halyeeyga MagaaladaHalyeeyada MagaaladaVirginiaWashingtonWaylon JordanWest VirginiawisconsinWyoming
Filim cusub oo loogu talagalay "Dukaameyste" waa istaabasho mugdi ah
Marvel's 'Alien' Teas marhore wuxuu umuuqdaa mid cajiib ah